Schauinsland Reisen anotarisira bhizinesi rezve ndege neAirxelerate
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Germany Kuputsa Nhau » Schauinsland Reisen anotarisira bhizinesi rezve ndege neAirxelerate
Germany Kuputsa Nhau • Guestpost • nhau • Technology • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
Airxelerate yakavambwa muBerlin muna 2018. Pamusoro pekugadzira yayo yega chigadzirwa chemugodhi weCalisto, kambani iyi yakaburitsawo zvakagadziriswa IT mhinduro dzemakambani ezvekushanya.
Mufambi wechiGerman anoshanda Schauinsland Reisen anoshandisa Airxelerate's Calisto Distribution Platform yekuparadzira musika.
Mune ramangwana, iyo sisitimu nyowani ichatsigira manejimendi evashanyi vazhinji vevashanyi uye vanovimbisa kuti kupihwa kwendege kunogoverwa zvakakwana kune mumwe wevashanyi.
Schauinsland Reisen iri kuwedzera kwayo IT zvivakwa neCalisto yekuparadzira Platform kubva kuAirxelerate. Mune ramangwana, iyo sisitimu nyowani inodzora inofamba nemutyairi yakawanda uye kuona kuti izvo zvinopihwa nendege zvinogoverwa zvakaringana nevashanyi vevashanyi.
Schauinsland Reisen anotarisira kuti iyo system ichaita kuti kutonga kwendege kuve nyore. "Schauinsland Yakasimuka inoshanda padhuze uye nekuvimba nenhamba huru yendege pasi rese. Airxelerate zvinoita kuti tikwanise kubata akasiyana aya masevhisi zvakazara uye nesimba, "anodaro Markus Förster, Musoro weFlight Distribution kuSchahauinsland Reisen.
Iyo Calisto Distribution Platform inoenderana nezvinodiwa zveyakajairika yezororo bhizinesi rebhizinesi, asi panguva imwecheteyo, inovaka tekinoroji bhiriji kune epasi rose akarongwa nendege. ICalisto Distribution Platform inogonesa nendege uye vanoshanda vekushanya kuti vango gadzirisa mazita mazita mumahofisi eanofambisa ndege-akasimba masevhisi masisitimu uye masisitimu ekudzora ekuenda.
“Ndege dzezororo uye dzakarongwa dzinoshandisa akasiyana mamiriro enzvimbo. Airxelerate inoputsa miganho yehunyanzvi nenzira yakanangwa uye inovimbisa maitiro akafanana mukutengesa kwendege mukushanya, "anodaro Nina Sifi, Managing Director weAirxelerate. Schauinsland Reisen ndiye wekutanga mushanyi kushandisa iyo yegore-yakavakirwa kutonga uye yekutengesa system iyo yakaunzwa gore rapfuura.
Airxelerate yakavambwa muBerlin muna 2018. Pamusoro pekugadzira yayo yega chigadzirwa chemugodhi weCalisto, kambani iyi yakaburitsa yakagadziriswa IT mhinduro dzemakambani ezvekushanya. Airxelerate inokunda tekinoroji miganho pakati pendege nekushanya uye kugona kwe data manejimendi uye kutengesa.
Nemaumbirwo akagwinya uye tekinoroji yazvino, maAirxelerate makore-based mhinduro anoderedza kuomarara uye mutengo. Kuvaka pamakumi emakore ehunyanzvi, ivo vatangi veBerlin kutanga-kumusoro vari kutyora ivhu nyowani mukufambisa tekinoroji.
Dzimwe nhau kubva kuGerman tinya pano.